U LIVE ဖြင့် webcam အသွားအလာကိုငွေရှာသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ CPA စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရရှိမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏လစာ - ရောင်းရငွေ Affiliate Program နှင့်ချိန်ညှိပါ။ အသုံးပြုသူများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ chat roulette site သို့သို့မဟုတ် app သို့မောင်း။ ၎င်းတို့ဝယ်ယူမှုအတွက်ငွေရှာဖွေပါ။
U LIVE CPA ကွန်ယက်သည်သင်၏ချိန်းတွေ့ခြင်း၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့် webcam အသွားအလာကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ငွေရှာနိုင်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလုပ်လုပ်ပြီးသင်၏လွှမ်းခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်နေရာဒေသ ၁၇ ခုကိုထောက်ပံ့သည်။ အမြတ်ရရန်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သို့မဟုတ်အခြားတစ်နေရာရာ၌ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်စပ်မှုလင့်ခ်ကိုတင်ပါ။ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ ၀ ယ်ယူထားသော ၀ ယ်ယူမှုတိုင်းနှင့်ရည်ညွှန်းထုတ်လွှင့်သူများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှရရှိသော ၀ င်ငွေအတွက်ငွေကိုရှာဖွေပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် U LIVE chat ကိုတင်ပါ
နေထိုင်မှုအချိန်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတိုးမြှင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှချက်တင်ကစားနည်းကိုသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ထည့်ပါ။ ဤအရာသည်ချိန်းတွေ့ခြင်း / အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုငွေရှာရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ကင်မရာကို ၄ င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များတွင်ထည့်သွင်းခွင့်ပြုသည့်တတိယပါတီဝက်ဘ်မာစတာများသည်တူညီသောပရိုဂရမ်စည်းကမ်းချက်များကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ embed ကုဒ်ကိုရှာဖွေ။ ကူးယူရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသို့မဟုတ် Android အက်ပလီကေးရှင်းမှတွဲဖက်ထားသောပရိုဂရမ်မီနူးသို့သွားပါ။
U LIVE ကျပန်းစကားပြောခြင်းကိုကွန်ပျူတာများ၊ စမတ်ဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များတွင်ရရှိနိုင်သည်။
သင်လိုချင်သည့်မည်သည့် browser ကိုမဆိုသုံးပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ chat roulette app သည်လူကြိုက်များသော browser အားလုံးတွင်ကောင်းမွန်သည်။
U LIVE ကိုသုံးရန်သင်၏ email ကို sign up လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
U LIVE အက်ပလီကေးရှင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်ငွေယူပါ
App ပြန်လည်သုံးသပ်သူကြေငြာသူများနှင့်ဘလော့ဂါများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်း ၀ မ်းသာပါသည်။ လူကြိုက်များသောအရွယ်ရောက်ပြီးသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များအတွက်အထူးစည်းကမ်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းရန်မျှော်လင့်!
အစွမ်းထက် Affiliate လင့်များနှင့်အတူဝင်ငွေ
သက်ဆိုင်ရာအသွားအလာရရှိနိုင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချိတ်ဆက်မှု link ကိုသာတင်ပါ။ ရောင်းရငွေ Affiliate ကွန်ယက်စနစ်၏ကုန်ကျစရိတ်သည် ၀ ယ်ယူမှုတိုင်းကိုငွေပေးချေကြောင်းသေချာစေသည်။
VISA, Mastercard, Paypal, Payoneer, Yandex, QIWI, SEPA, Bitsafe ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုပါသို့မဟုတ်ငွေထုတ်ယူရန်ငွေတောင်းခံလွှာကိုယူပါ။
U LIVE လက်တွဲဖော်များအနေဖြင့်အသုံးပြုသူများနှင့်ထုတ်လွှင့်သူများထံမှအမြတ်အစွန်းရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ webcam မိန်းကလေးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပွင့်လင်းမြင်သာသော ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ကင်မရာအစီအစဉ်၏အားသာချက်ကိုယူပြီးထုတ်လွှင့်သူများအားကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ပါ။ သင်ရည်ညွှန်းသောဝက်ဘ်ကင်မရာထုတ်လွှင့်သူတိုင်းမှရရှိသော ၀ င်ငွေ၏ ၁၀% ကိုရယူပါ။
ငါတို့နှင့်အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသွား! ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းကိုဘာသာစကား (၁၇) ခုဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများသည်တိကျသောစျေးကွက်နယ်ပယ်တစ်ခုကိုပြိုင်ဘက်များ (သို့မဟုတ်နယ်နိမိတ်များ) မပါဘဲကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါသည်။
သင်၏ CPA စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုအားကျွန်ုပ်တို့၏ LIVE chat chat roulette အမှတ်တံဆိပ်၏အမှတ်အသားနှင့်အညီမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါ။